वाम एकता भाँडने षडयन्त्रमा नफस्न र सावधान रहन अध्यक्ष प्रचण्डको आव्हान – cmprachanda.com
वाम एकता भाँडने षडयन्त्रमा नफस्न र सावधान रहन अध्यक्ष प्रचण्डको आव्हान
२०७४ फाल्गुन ५ गते १७:२४ मा प्रकाशित
हात्तीलेट, महोत्तरी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा वामपन्थीहरुबीचको एकता भाँडन बिभिन्न तत्वहरुले षडयन्त्र गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
महोत्तरीको हात्तीलेटमा आयोजित बृहत जनसभा तथा प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता र गठबनधनको प्रक्रिया शुरु भएदेखि पार्टी एकता हुन नदिन षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभएको हो ।
“नेपालमा ७० वर्षदेखि कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता भएन, कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेन । त्यसैले सुशासन, समृद्धि र समाजवादी नेपालको लागि कम्युनिष्ट शक्तिबीच एकता र वाम गठबन्धन जरुरी छ भनेर मैले नै प्रस्ताव अगाडि बढाएँ ।” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “जनताको चाहना पनि यही भएकोले अहिले झण्डै दुई तिहाई बहुमत वामपन्थीहरुको आएको छ । तर वाम एकता नहोस् र नेपाली जनताले विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रा प्राप्त गर्न नसकून भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागि परेका छन् ।”
प्रदेश र संघको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई बहुमत आएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रलोभन र धम्की दिएर एकता भाँडने षडयन्त्र भएको अध्यक्षले बताउनुभयो । अध्यक्षले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा दुई तिहाई आएपछि कहिले माओवादीलाई, कहिले एमालेलाई प्रलोभन र कहिले धम्की दिएर गठबन्धन टुटाउने षडयन्त्र भइरहेको छ ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासको निर्माण गर्न एक दुई जना नेताको मात्रै भर पर्न नसकिने बताउनुहुँदै सिँगो पार्टीका नेता र कार्यकर्ता चनाखो हुनुपर्ने समेत बताउनु भयो । “सबैमा अपील गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सतर्क रहनुहोला, सावधान रहनुहोला, ताकि षडयन्त्रकारीको षडयन्त्रमा कोही नफसौं ।” अध्यक्षले भन्नुभयो, “हामीले जुन ऐतिहासिक मिसन गरेका छौं, शहीद र अग्रजले देखेका सपना पुरा गर्ने जुन महान अभियानको शुरुआत भएको छ, त्यसलाई बीच बाटोमा नै तुहाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने षडयन्त्र भएको छ । तपाईहरु सतर्क बस्नुहोला ।”
दुई नम्बर प्रदेशका सबै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आ–आफनो पार्टीका नेतालाई सतर्क तुल्याउने र गठबन्धनलाई सफल पार्न समेत अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन आव्हान गर्नुभयो ।
हात्तीनेटको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्व रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले २०३६ सालको ऐतिहासिक आन्दोलनको बेला क्रान्तिकारी गाउँका रुपमा हात्तीनेट गाउँका रुपमा सुनेको बताउनुभयो । “तर धेरैपटक महोत्तरी आएर पनि हात्तीलेटमा आएर यहाँका अग्रज कमरेडसँग भेट र जनसमुदायसँग संवाद गर्ने अवसर जुटेको थिएन ।” वहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, “एक वर्षअघि म प्रधामन्त्री हुँदा मधेश र पहाड के हुने हो ? छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध के हुने हो ? संविधान बनेपनि कार्यान्वयन हुने हो कि होइन, निर्वाचन हुने हो कि होइन ? भन्ने अवस्था विद्यमान थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कारण मधेश र पहाडी जनतालाई विश्वासमा लिएर संविधानमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लैजाने मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य थियो । मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रधानमन्त्री भएदेखि मधेशसँग संवाद गर्ने, असन्तुष्ट पक्षसँग बारम्बार वार्ता गर्ने र निर्वाचनसम्म देशलाई लैजान सके, त्यसमा मलाई गर्व छ ।”
मधेसका जनताले आफ्नो अपीललाई निकै उच्च महत्वका साथ लिएको समेत प्रचण्डले बताउनुभयो । “पहाडमा ७३ प्रतिशत भोट खस्दा मधेसमा ७७ प्रतिशत भोट खस्यो । मधेसका जनताले मेरो अपीललाई गम्भीररुपमा लियो । यसमा मलाई गर्व छ ।” वहाँको भनाई थियो
राजपाका केन्द्रीय सदस्यसहित ६ सय बढी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
सम्बोधन अघि अध्यक्ष प्रचण्डले राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य अनिल बस्नेतसहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरी छ सय बढी नेता तथा कार्यकर्तालार्य पार्टीमा प्रवेश गराउनुभएको थियो
प्रवेश गर्नेमा रमेश बुलान, प्रमुख सल्लाहाकार, वादसिंह तामाङ जिल्ला उपाध्यक्षको नेतृत्वमा छ सयबढी नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् ।
इसैगरी आज नै अ्धयक्ष प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनमा योगदान पुर्याउनुभएका सय बढी स्थानीय व्यत्तिःत्वहरुलाई सम्मानित गर्नु भएको थियो ।
महोत्तरीको हात्तीलेटमा आयोजित बृहत जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधन
Posted by National Hero Comrade Prachanda राष्ट्रनायक क. प्रचण्ड on Saturday, February 17, 2018
माओवादी संसदीय दलको बैठक सम्पन्न, अध्यक्ष प्रचण्ड संसदीय दलको नेता
By cmprachanda	 Feb 17, 2018